Usoro mgbanwe maka ịde blọgụ azụmahịa | Martech Zone
Mọnde, Jenụwarị 11, 2010 Sọnde, Febụwarị 9, 2014 Douglas Karr
E nwere ọtụtụ na mgbasa ozi mgbasa ozi ụwa ebe ahụ na-ekpe ikpe na-aga nke ọma na blog site na metrik nke njikọ aka dị ka nkọwa. Achọghị m. Enweghị mmekọrịta dị n'etiti ihe ịga nke ọma nke blọọgụ a na ọnụọgụ nke okwu na ya. Ekwenyere m na ihe ndị ị na-ekwu nwere ike imetụta blog - mana n'ihi na ọ bụghị ihe ị nwere ike ijikwa ozugbo anaghị m elebara ya anya.
Ọ bụrụ na m chọrọ ikwu, M ga-ede njikọ baiting isi, eneni ọdịnaya na snarky blog posts. Nke a, n'aka nke ya, ga-eme ka ndị isi na-ege m ntị kwụsị ndị ọjọọ.
Usoro ngbanwe ịde blọgụ azụmahịa atọ m na-ege ntị na:
Nsonaazụ Nsonaazụ Nchọgharị Search engine - Ọtụtụ ndị ọkachamara na-elekwasị anya na ole okporo ụzọ ọchụchọ engine ị natara… ma ọ bụghị ole okporo ụzọ ị furu efu. Ọ bụrụ n ’ide ederede dị larịị na data meta gị anaghị akwụ ụgwọ, ị nwere ike ime ka elu ọkwa ọchụchọ ahụ mana ndị mmadụ nwere ike ghara ịpị njikọ gị. Dee akwukwo ndi edere na-agbanwe okporo ụzọ ma hụ na nkọwapụta meta gị juputara na isiokwu na nnukwu ihe mere ị ga-eji pịa! Ahu nagide Google Search Console iji nyochaa nsonaazụ ndị a.
Kpọọ Iji Mee mgbanwe - Ndị ọbịa oge izizi na-abanye na blọọgụ gị ma na-ahapụ ma ọ bụ na-achọ ịzụ ahịa gị. Na-enye ha ụzọ ha ga-esi esoro ụlọ ọrụ gị? Have nwere ụdị kọntaktị a ma ama na njikọ? Adreesị gị na akara ekwentị gị ọ bụ nke ọma? Have nwere Oku Kpọrọ Ihe Iji Mee ka ndị ọbịa na-apị?
Ntughari ihu akwukwo - Mgbe ndị ọbịa gị na ịpị ịkpọ oku gị ka ha mee ihe, ha na-abanye na ibe na-eme ka ha gbanwee? Bụ gị landing peeji nke dị ọcha na efu nke igodo na-enweghị isi, njikọ, na ọdịnaya ndị ọzọ nke ahụ anaghị ebu ire ere?
Ga-enwerịrị olile anya gị ka ị wee nweta ha dịka ndị ahịa. Must ga-adọta ntinye ha na peeji nke nsonaazụ ọchụchọ ahụ (SERP), ị ga-enyerịrị ha ọdịnaya dị mkpa iji nweta ntụkwasị obi ha ma kpalie ha igwu miri emi, ị ga-enyerịrị ha ụzọ itinye aka - dị ka oku na-akpali akpali ime ihe (CTA) ma ị ga-enyerịrị ha ụzọ iji kpọtụrụ gị - dị ka ibe echepụtara nke ọma, kachasị maka ọdịda.
Ngwakọta Na-arụ ọrụ ndị a kachasị mma!
Nke mbụ: Nsonaazụ ọchụchọ ọchụchọ maka Na-achọpụta Blogde blọgụ azụmahịa ROI, Compendium nwere ebe nke abụọ ma edekwa ya nke ọma - jide n'aka na ị ga-adọta ụfọdụ okporo ụzọ!
Mara: You'll ga-achọpụta na Compendium nwere nsonaazụ nke abụọ maka nchọta ọ bụghị nsonaazụ mbụ. Ọ bụrụ na aha peeji nwere Compendium Blogware na njedebe nke aha ahụ karịa mmalite, ụbọchị na onye edemede dere amaara, na nkọwa meta nwere asụsụ na-adọrọ adọrọ karị, ha nwedịrị ike ịpịpụta nsonaazụ ogo dị elu. (Ọ dị mma na nkọwapụta meta na-amalite site na isiokwu ahụ, agbanyeghị!) Mgbanwe ndị ahụ nwere ike okpukpu abụọ ma ọ bụ okpukpu atọ mgbanwe site na peeji nchọta njin nchọgharị a.
Nke abuo: Ọ bụ ọkwa dị nkenke mara mma nke na-adọrọ uche gaa na abụọ ihe ndi ozo gbakọọ Return of Investment. Nke a bụ ọkwa siri ike, dị mkpa, n'agbanyeghị!
Rịba ama: Otu ụzọ isi meziwanye nke a nwere ike ịbụ n'ezie inye ihe nke atọ - nke ahụ n'ezie Kpọọ ime ihe na Ngwaọrụ ROI.
Nke atọ: Oku na-aga ime ihe mara ezigbo mma ma dịkwa mkpa na oyiri na ibe ahụ, ọ bụkwa ụzọ doro anya iji chọta ozi ndị ọzọ!
Anọ: Ibe ọdịda ahụ enweghị ntụpọ ọ bụla - na-enye nkwado, na-akpali akpali ọdịnaya, obere ụdị iji nakọta ozi kọntaktị maka ndị otu ahịa, yana ụfọdụ ajụjụ ị ga-achọ iji nweta mmetụta maka atụmatụ mmefu ego na echiche nke ịdị ngwa.
Ndị otu ahịa na Compendium dị ịtụnanya n'iji ngwa ọrụ ha arụ ọrụ. Amaara m n'ezie na Compendium na-achịkọta ọtụtụ ụzọ site na nsonaazụ ọchụchọ yana blọgụ nke ha karịa ebe ọ bụla. O doro anya na ọ bụ n'ihi ọrụ dị oke egwu ha na-arụ n'ule, na-enyocha ma na-ebuli ụzọ ntụgharị ha. Ị mere nke ọma!
Nkwupụta zuru ezu… Enwere m mbak ma nyere aka bido Compendium Blogware (ekele ịdị mma na ha esoghị ya akara m!)
Tags: ịde blọgụ azụmahịausoro ntughariụlọ ọrụ ịde blọgụ